नेपालको जमीन भारतले लगातार मिचिरहेकोछ – सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ (भिडियो सहित) – रियलपाटी
Posted on May 17, 2019 May 17, 2019 Author real pati	Comments Off on नेपालको जमीन भारतले लगातार मिचिरहेकोछ – सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ (भिडियो सहित)
प्रतिपक्षमा जाँदा बोल्छन् तर सत्तामा जाँदा चुप हुन्छन् देशको सीमाका विषयमा भारतलाई प्रश्न समेत गर्न डराउँछन् नेताहरु । आफुले सरकारमा गएर पाएको पद भारतले खोसिदिन्छ कि भन्ने डर छ नेताहरुलाई ।
लामो समय नापि विभागको सरकारी सेवामा रहेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अन्तरदेशीय सीमाविद् समेत हुन् । नेपाल–भारतको सीमाका विषयमा विशेष जानकार श्रेष्ठसँग नेपाल भारत सीमा विवादका विषयमा गरिएको कुराकानी (भिडियो सहित)
भारतीय किसानले नेपालका निर्धा किसानको जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । यदि नेपालका किसानले हाम्रो जग्गा मिचियो भनेर आवाज उठाए भने भारतीय एसएसविका जवानहरुले बन्दुक तेर्साउछन् नेपाली किसानमाथि ।
१.अहिले देखिरहेको नेपाल र भारतविचको सिमा विवाद वा सिमा समस्या के के छन् । खासमा नेपालको कतिवटा स्थान भारतले अधिग्रहण गरिरहेको छ ?
नेपाल र भारतको सिमानाको कुरा गर्दा नेपालमा २६ जिल्ला भारतीय सीमासंग जोडिएको छ । त्यसमध्ये एक हजार आठसय असि किमी र ८८० किलो मिटर लामो जमिन भारतीय सिमासंग जोडिएकोछ । त्यस मध्ये २३ जिल्लाको ७१ स्थान अधिग्रहणमा परेका छन् । एक हजार ८८० किलो मिटर लामो सीमाना भारतसँग जोडिएको छ । सबैभन्दा धेरै बिबाद चाहीँ दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाबिसको बडा नम्बर एकको कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा छ जहाँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ । देशैभर गरेर ६० हजार ६ सय हेक्टर जमीन मिचेको छ । कालापानीमा मात्र ३७ हजार हेक्टर भुमी अतिक्रमण गरेको छ ।
२.नेपाल र भारतविचको सिमानामा समस्या आईरहनुको कारण के हो ?
मुख्य कुरा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालको सार्वभौमिकता बचाउनका निम्ति सन् १८५७ मा जंगे खम्बा गाडेका थिए तर पछि त्यहाँ जंगे खम्बा भारतीयहरुले भत्काएर सिमा रेखाको नामोनिसान नराखेपछि त्यहाँबाट अधिग्रहणको सिलसिला शुरु भएको हो । नेपाल भारतको अन्य सिमानामा पनि यस्ता जंगे खम्बा हराउनु र घर बसाउने आवादी गरेका कारण भारतीय किसानहरुले नेपालको जग्गा अधिग्रहण गरिरहेका छन् । कतै नदिले बगाएको कतै सिमारेखा मेटाईएकोकारण सिमारेखा अस्पष्ट भएकै कारण नेपालको भूभाग मिचिएको छ ।
३.यसरी भारतले निर्धक्क रुपले लगातार सिमा मिचिरहनुमा कमजोरी कसको छ राज्यको या आम नेपाली नागरिकको ?
यसमा बलियोले निर्धालाई हेपिएको छ । सिमाना अंकन गर्नु दुवै देशको साझा भएपनि भारतले नेपालको सिमानामा ४५ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ भने नेपालका तर्फबाट सबैतिर गरेर लगभग साढे ५ हजार मात्र तैनाथ छन् । यसरी भारततर्फबाट धेरै सेना तैनाथ गरेको भएकर उनिहरुले आफ्ना देशको जग्गाको प्रतिरक्षा गर्ने तिनै सुरक्षाकर्मीको आडमा भारतीय किसानले नेपालका निर्धा किसानको जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । यदि नेपालका किसानले हाम्रो जग्गा मिचियो भनेर आवाज उठाए भने भारतीय एसएसविका जवानहरुले बन्दुक तेर्साउछन् नेपाली किसानमाथि । त्यहि कारण जमिन मिचिएको छ । उदाहरणका लागि नवलपरासिको सुस्तामा नेपाली किसानहरु गोपाल गुरुङ ,आदम खाँ , मुन्ना खाँ, रोज अलि मियाँलगाएतले हाम्रो जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर आवाज उठाउँदा भारतीय एसएसविले बन्दुक तेर्साई पक्राउ गरि कुटपिट गरि यातना दिएर जेल सजाय समेत भोग्नुपर्यो । नेपाल सरकारले आफ्ना जग्गा र नागरिकको राम्रो रेखदेख र सुरक्षा दिन नसक्दा नेपालमाथि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएकाले कमजोरी राज्यकै हो ।
४.के हामीसंग पुराना दस्तावेज वा सन्धीसम्झौताका प्रमाणहरु छन् जसले सिमारेखा वा पुरानो नक्साहरु देखाउँछन् ?
हामीसंग प्रसस्तै प्रमाण छन् । हामीसँग नक्सा, दस्तावेज, जनताले जग्गा कमाई गरेर तिरो तिरेको रसिदहरु, बाबु मरेर छोराको नाममा जग्गा नामसारी भएर आएको ढड्डा टिपोटहरु हामीसँग छन् । नेपाली भुमि मिचिदै गई भारत बन्यो भने नेपाली नागरिक विदेशी हुँदै गए भए भने नेपालको अस्तित्व नै मेटिन्छ । अंग्रेजकै पालोमा बनेका सन् १८१७, सन् १८३०, सन् १८६०, १८५७, १८८१, ८२,८३मा बनाएको नक्सा छ । यदि नेपालमा भेटिएन भने पनि त्यो अमेरिकका लाइब्रेरी अफ काँग्रेस र लण्डनको ब्रिटिस म्युजियममा सुरक्षित छ । नेपालले आफुसंग प्रमाण छैन भजेर आत्तिनु पर्दैन ।
५.दशगजा कै कुरा गरौं भर्खरै मात्र केहि समयअघि सप्तरीको तिलाठीको खाँडो नदीमा भारतीयहरुले बाँध बाँधेर कति बस्ती डुबानमा पार्ने प्रयास गरेपछि नेपालीहरु त्यो बाँध भत्काउन गए त्यहाँ झडप पनि भयो धेरै नेपाली घाईते पनि भए । अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार सिमादेखि कति किमीसम्म बाँध बाँध्न पाईन्न ?
भारतले अनायास रुपमा तटबन्ध बनाउदा खाँडो नदीमा बाँध बाँधे । नदिको प्राकृतिक बहाब बन्द हुदा कयौं बस्ती डुबानमा पर्ने जोखिमका कारण नेपालीहरुले त्यस तटबन्ध भत्काईदिए । भारतबाट नेपालमिाथि एक हजारजना जाईलागेका थिए भने नेपालीहरु ५ सयजनामात्र थिए । दुवैतिरबाट झडप भयो र नेपालीहरु घाइते पनि भए । एकतर्फी रुपमा जंगे खम्बा २ सय २२ , २ सय २३ को बिचमा ५ मिटर नेपालतर्फको भुभाग मिचेर बाँध बनाएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय नियमअनुसार एक देशबाट बगेर जाने नदिको सिमानाबाट ८ किमी तल्लो र माथिल्लो दुवै तटिय क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको बाँध अन्य देशले एकतर्फी बाध्न पाईन्न ।
६.यसरी भारतले वर्षेनी नेपालका नदीमा बाँध बाध्छ । भारतको हेपाहा प्रवृति यसपटक मात्र नभई धेरैअघि देखिको हो । किन भारतीयहरुको नेपालमा मनलाग्दी र हेपाहा प्रवृति मौलाएको हो यसमा कतै राजनितिक कारण त जोडिएको छैन ?
हो यसमा अवश्यपनि राजनितिक कारण जोडिएको छ । नेपालीहरलाई अनावश्यक दुख दिएमा नेपालीहरु उसको छत्र छाँयामा र शरणमा नेपालीहरु जान्छन् भन्ने भारतसंग मनोवैज्ञानिक धारणा छ । यो सीमाका जग्गा अधिग्रहण तथा सिमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बनाउनुको मुख्य कारण पनि यहि हो ।
७.सन् १९५० मा नेपाल र भारतविच भएको सन्धी असमान र अन्यायपुर्ण रहेका छ भनिन्छ नि ?
हो सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा नेपालले कुनै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्यो भने भारतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भनेर लेखिएको कारण पनि भारतले हेप्न खोजेको हो । त्यति मात्र होइन १९५० को सन्धीको धारा ८ मा के लेखिएको छ भने कुनै एउटा देशले आफुलाई अफ्याठेरो पारेको व्यहोराका साथ यो सन्धी रद्द गरियोस् भनेर पत्राचार गरेमा एकवर्षपछि सन्धी स्वत रद्द हुन्छ तर नेपालले यस विषयमा चासो देखाए। पत्र लेखेको छैन । यदि त्यो धारा ८ लागू भएमा नेपालको भू–भाग फिर्ता आउनेछ । हाल प्रवुद्ध वर्गसमुहले यसबारे विभिन्न विद्धानहरुसंग परामर्श गरिरहेका छन् ।
८.नेपालको सीमा छिमेकी देश चिनसंग जोडिएको छ तर चीनसंग भने भारतसंगजस्तो विवाद छैन ?
चीन भारतको तुलनामा निकै नै समझदार छ । चीनले नेपालसँग राजा महेन्द्रको पालामा १९६१ मा सीमा सन्धी गरेको थियो । १९६२ सिमाङंकन पनि भयो । सिमांङकन गर्दा राम्रो अध्ययन नभएर नेपालको भाग चीनतिर र चीनको जमीन नेपालमा पर्न गयो । नेपालको १८०० बर्गमिटर नेपालको भू–भाग चीनमा गयो र २१०० बर्गमिटर भाग नेपालतिर आएको थियो । यसपछि चीनलाई नेपालले पत्र पठायो । आफ्नो आफ्नो भुभाग फकाईयो भने दोलखाको लामाबगर गाबिसको लाप्ची गाउँका बासिन्दा चरन नपाएर चौंरी पाल्न नसक्ने अबस्थामा थिए समस्या समाधानको लागि केहि वर्ष अघिमात्रै चिनिया राजदुतले उल्टै उनिहरुको भुभाग नेपालीहरुलाई चौरी चराउन दिए ।
९.यहाँले प्रकाशन गर्नु भएको पुस्तक जंगे बुद्धेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई देशको सीमा बचाउने रक्षकका रुपमा वयान गर्नुभएकोछ । जंगबहादुरले त्यस्तो के काम गरेका थिए ?
हो केहिदिन अघिमात्र प्रकाशित मेरो पुस्तकामा जंगबहादुरलाई राष्ट्रको सिमा रक्षकका रुपमा मैले लेखेको छु । देशको सार्वभौमिकता बचाउनको निम्ती पन्ध्र नोमेम्बर सन् १८५७ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अग्रेजबाट फिर्ता लिने वित्तिकै ब्रिटिस ईन्डियनहरुलाई सीमामा खम्बा नगाडेसम्म जमिन फिर्ता लिन्न भनेपछि सन् १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता लिएको सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि सबै ठाउँमा जंगे खम्बा गाडीएको थियो । यसकारण जंगबहादुर सच्चा राष्ट्रसेवक थिए । तर नेपालका राजनितिक पार्टीका नेताहरु जंगबहादुको ठिक विपरित छन् नेपालको सिमा विवादका विषय र भारतीयले सिमा मिचेको कुरा सबैलाई थाहाहुदा हुँदै मौन छन् ।
तपाईले अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । सरकारमा नजाउञ्जेल प्रतिपक्षमा बसेर देशको भक्तले झै कुरा गर्छन् । वेथिथिका बारे भाषण गर्छन् । यहि सिमा मिचिएकाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसैगरि मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादलले लिपुलेक,लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो भुभाग हो भारतले मिच्न पाउदैन भनेका थिए तर उहाँहरु जो जो प्रधानन्त्री हुन्छन् त्यसपछि उनिहरु चुप बसिदिन्छन् । यो नबोल्नु राजनितिक कारणसंग जोडिएको छ । प्रतिपक्षमा जाँदा बोल्छन् तर सत्तामा जाँदा चुप हुन्छन् देशको सीमाका विषयमा भारतलाई प्रश्न समेत गर्न डराउँछन् नेताहरु । आफुले सरकारमा गएर पाएको पद भारतले खोसिदिन्छ कि भन्ने डर छ नेताहरुलाई ।
अवश्य पनि नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ । सबभन्दा पहिले प्रमाण जुटाई सौहार्दपुर्ण अवस्थामा मीलेमतो गरि अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ यदि त्यसो हुन सक्दैन भने कुनै मध्यस्थकर्ता देशको सहयोगमा उदाहरणका लागि बेलायतलाई यसबारे सबै जानकारी छ उसको सहयोगमा समाधान गर्न सक्छ । अन्र्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा जानुपर्छ त्यसमा जानको लागि नेपाल सरकार जानुपर्छ । तर समय धेरै पनि लाग्छ । मलाई विश्वास छैन कि सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने हिम्मत राख्न सक्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय सौहार्दपुर्ण रुपमा नेपाल र भारतले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नु हो ।
Posted on January 15, 2019 March 14, 2019 Author Real Pati Author
If you wear organization everyday and an individual will stop by, this is going to illustrate that if you’re interested […]
Posted on August 17, 2019 August 23, 2019 Author real pati
काठमाडौं । नजिकैदै गरेको हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरुको महान् चाड हरितालिका तीजको अवसरमा इन्द्रेणी सिप विकास तालिम केन्द्रले शनिबार विभिन्न क्षेत्रमा […]
Revealing Practical Solutions For Bright Brides
Posted on August 9, 2018 February 26, 2019 Author Real Pati Author
What You Should Do to Find Out About International Killer Before You’re Put Aside If it isn’t, it will take […]